Modely momba ny hevitra prototyping | Prototype Prototype - Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
FAMPIHARANA / Porofon'ny fiheverana
Ny teknolojia sy ny fitaovana prototyping an'ny CreativeProto dia mamela ny mpanjifanay haka modely miorina amin'ny prototyped mandritra ny dingana rehetra amin'ny fizotry ny famolavolana ho an'ny tombana amin'ny maso ny endrika, endrika, fampiasa ary ny fijery sy ny fahatsapana amin'ny ankapobeny. Afaka mifandray mazava amin'ny ekipa mpamorona sy ny mpanjifa ianao, mahazo valiny am-boalohany ary ho lasa tsara kokoa amin'ny ho avy!
Hevitra tanterahina miaraka amin'ireo prototypes Design Concept
Inona no atao hoe famolavolana hevitra?
Ny famolavolana hevitra dia dingana mamorona indrindra amin'ny fampiroboroboana ny vokatra izay inoan'ireo injeniera sy mpamolavola eritreritra mandro sy ny fahafaha-manao isan-karazany. Izy io dia dingana voalohany amin'ny fampiroboroboana ny vokatra sy ny fanahin'ny fanavaozana, ny fizotrany miverimberina eo amin'ny tsingerina, manampy amin'ny fikarohana vahaolana tsara indrindra sy ny fanatsarana ny endrika.
Fa maninona no zava-dehibe tokoa ny famolavolana hevitra raha vao manomboka ny fizotry ny famolavolana?
Tsy maintsy ho izy no zavatra voalohany satria ny valin'ny famolavolana hevitra dia hiditra amin'ny fizotran'ny famolavolana sy ny injeniera manaraka. Arakaraka ny andrasanao ny famantsihana ny hazofijaliana no hitombo ny vidin'ny fampandrosoana. Raha ny marina, ny fahombiazan'ny vokatra dia miankina amin'ny fahazoana ny hevitra hatrany am-piandohana. Aza atao ambanin-javatra ny maha-zava-dehibe ny prototype-porofon-kevitra (POC) ary mandrosoa nefa tsy voaporofonao amin'ny tenanao sy ny hafa fa azo tanterahina ara-teknika ny hevitrao.
Fa maninona ny CreatProto no mifantoka be loatra amin'ny volavolan-kevitra momba ny prototyping?
Ny maodely ho an'ny prototyped mora vidy sy lafo vidy dia fitaovana sarobidy amin'ny fampitana hevitra na hevitra amin'ireo mpiara-miasa, mpanjifa ary mpivarotra amin'ny fomba tsy tratran'ny maodely 3D ao anaty solosaina.
Miaraka amin'ny karazana teknolojia sy fitaovana, CreateProto dia manolotra ny mpanjifanay fotoana tsara hanombohana haingana ny vokatra mandritra ny dingana rehetra amin'ny fizotry ny famolavolana ho an'ny tombana amin'ny maso ny endrika, endrika, fampiasa ary ny fijery sy ny fahatsapana amin'ny ankapobeny.
Alohan'ny handehananao ny làlan'ny fampivelarana ny kinova azo amboarina ny vokatrao dia tokony nofantsihana teo amin'ny rindrin'ny ankamaroan'ny vahaolana ianao. Na inona na inona fahasarotan'ny vokatra, iray amin'ireo zavatra voalohany ataon'ny Createproto ho anao ny manaporofo fa azo atao ara-teknika ny hevitry ny vokatra hahomby.
Mamorona ny Prototype-porofo-of-Concept
Dingana hanovana ny hevitrao ho zava-misy
Fepetra takiana (Hevitra) -> Famolavolana hevitra -> Modely CAD -> Fanadihadiana DFM -> Prototype momba ny hevitra -> Fanatsarana endrika
Rehefa voafarinao ny fepetra takiana amin'ny vokatra, alohan'ny hanombohanao ny famolavolana antsipiriany dia hifindra amin'ny dingana famolavolana hevitra ny tetikasanao.
Ny famolavolana antsipirihany dia novokarina tamin'ny programa 3D sy maodely modely CAD, toy ny SolidWorks. Ny maodelin'ny CAD dia noforonina ho an'ny singa sy fivoriambe hijerena ny olana mety hitranga alohan'ny hanaovana faritra ara-batana.
Rehefa ampiasaina ny famolavolana ho an'ny famakafakana fanamboarana (DFM), dia hapetraka ny ampahany sy ny fivoriambe hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fahaiza-manao amin'ny famoronana.
Ny famolavolana antsipirihanao dia hamboarina amin'ny alàlan'ny fanontana 3D na teknika prototyping haingana hafa. Amin'ity dingana ity dia hanomboka ho hita sy hahatsapa tena ny endriny - mampientam-po tokoa!
Ny fivorian'ny prototype voalohany dia dingana iray manandanja amin'ny fanamarinana ny fiheverana ny endrika taloha. Ny fanandramana ara-batana dia manamafy fa mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fampisehoana napetraka nandritra ny dingana foto-kevitra ny prototype.
Raha ilaina ny fanovana dia havaozina ireo maodelin'ny CAD ary hovaina ireo maodely fakana hevitra mandra-pahatanteraky ny fanantenana rehetra.
Manolotra fomba hafa i CreateProto amin'ny maodely ho an'ny Prototyping Concept Rapid
Mino izahay fa ny famolavolana hevitra dia manakiana ny famoronana vokatra lehibe. Ny fanaovana prototypes hevitra alohan'ny hifindrana amin'ny sehatry ny famolavolana injeniera dia zava-dehibe satria afaka mandroso ny fizotran'ny modelin'ny famolavolana vokatra sy mampitombo ny fanavaozana. Ny maodelin-kevitra dia fohy ihany, fa manandanja amin'ny famoahana ny hevitrao.
Mba hampiroboroboana ny fizotrany dia azonao atao ny manana karazana fiheverana marobe hovolavolaina miaraka amin'izay, hizaha ireo safidy toy ny fomba, ny fomba fiasa ary ny fizotry ny famokarana ary avy eo misafidy ny tsara indrindra amin'ny fampitahana mifanila.
Teknolojia fanamboarana mandroso ho an'ny porofon'ny prototype ny hevitra izay be mpampiasa dia ny Stereolithography (SLA), Selective Laser Sintering (SLS) ary ny Machining CNC, izay matetika no voafidy hanombanana ireo maodely sy famolavolana hevitra.
Ny serivisy prototyping haingana an'ny Createproto dia ahafahan'ny ekipa mpamorona hanafohezana ny tsingerina amin'ny fizotran'ny vokatra nentin-drazana, manafaingana ny vokatra mankany amin'ny tsena haingana.
Ny famaranana ny prototype dia hahatonga ny fahasamihafana ho an'ny prototype prototype mahomby. Ny ekipanay nahavita be za-draharaha dia manolotra famaranana tanana, volon-doko, loko miloko, endrika ary famaranana malefaka; ary mampiasa fomba fananana maromaro hitazomana ny fivorian'ny marina sy ny fisehoan'ny maso tsara indrindra.
Ny hevitra famolavolana vokatra prototyping dia manome anao ny fahaizana
Mamolavola sy manadio ireo hevitra momba ny vokatra ary mitsitsy fotoana sy vola be.
Mahazoa valiny azo tsapain-tanana amin'ny fikitika sy fahatsapana.
Ataovy maimaimpoana kokoa ny famerenana ny famolavolana amin'ny alàlan'ny fanombanana ny maodely hita maso.
Porofoy amin'ny fomba mahomby kokoa ny hevitrao amin'ny mpiara-miasa, mpanjifa ary mpitarika.
Tehirizo ao an-trano ny fanananao ara-tsaina.
Jereo ny vahaolana tsara indrindra amin'ny fahaiza-mamokatra.
Manomboha amin'ny hetsika marketing.
Prototyping haingana, Prototyping haingana, Prototyping haingana sy famokarana, Cnc Prototyping haingana, Serivisy fanaovana pirinty 3d sy Prototyping haingana, Cnc Prototyping,